प्रधानमन्त्री देउवाले ६ जिल्लामा किन गरे एउटै भाषण ? हेर्नुस् रमाइलो भिडियो
समाचार प्रधानमन्त्री देउवाले ६ जिल्लामा किन गरे एउटै भाषण ? हेर्नुस् रमाइलो भिडियो
Ujyaalo आइतवार, मंसिर १७, २०७४ २१:२६:००
काठमाडौं, मंसिर १७ –पहिलो चरणको चुनाव सकिइसकेको छ । दोस्रो चरणको चुनाव आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ ।
अब केही दिन मात्रै दलहरुले प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन् । मौन अवधि सुरु हुन केही दिन मात्रै बाँकी भएकाले पनि अहिले दलहरुले आफ्नो प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, वाम गठबन्धनलगायतका विभिन्न दलहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन् । एकले अर्काको खेदो खन्ने परम्पराको अन्त्य यो चुनावमा पनि भएन ।
चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा दलहरुले विकासका मुद्धामा भन्दा पनि आलोचनामा बढी समय खर्चेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि दलहरु तुच्छ शब्दको प्रयोग गरेर एकले अर्काको आलोचना गरिरहेका छन् । अझ रमाइलो कुरा त के भने नेताहरुका एउटै भाषणले नागरिक वाक्क भएका छन् । जहाँ गए पनि एउटै भाषण दिनेमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा पनि पर्नुहुन्छ ।
उहाँले ६ वटा जिल्लाका चुनावी आमसभामा गरेका भाषण लिखित मन्तब्यजस्तै नै छन् । उहाँले ती ६ वटै भाषणमा अब आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई दोहोर्याइरहनु भएको छ । संविधान निर्माण कांग्रेसकै सरकारका पालामा र सक्रियतामा बनेको कुरा उहाँको भाषणमा छुट्ने कुरै भएन् । वामपन्थीहरुले जिते भने संविधान उल्ट्याउँछन् र अधिनायकवाद लाद्छन् भन्ने कुरा पनि उहाँको भाषणमा आइरहने वाक्य हुन् ।
उहाँका भाषणमा विकासका कुरा भन्दा पनि वाम गठबन्धन बढी आइरहेको हुन्छ । कांग्रेस र प्रजातन्त्र भन्दा उहाँको भाषणमा कम्युनिष्ट र साम्यवाद बढी आएको हुन्छ ।